အသက်ရှည်ရှည် နေချင် သူ များ နောက်မကျသေးဘူးနော် – MalMaDi
အသက်ရှည်ရှည် နေချင် သူ များ နောက်မကျသေးဘူးနော်
November 11, 2020 Malmadi KNOWLEDGE
အသက်ရှည်လိုပါက (ဂျင်း) ကို မြိုပါ။မြန် မာနိုင် ငံမှ ဆရာဝန် တစ်ဦး တိဗက် နိုင် ငံကို အလည်အပတ် ရောက် သွားခဲ့ပါတယ်
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်၏ ညွှန်ကြားမှု ဖြင့် တောင် ပေါ်ရွာ လေးတစ် ရွာ၏ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ တည်းခိုခွင့် ရခဲ့ပါတယ်
ထို ဘုန်းကြီးတော်ကြီး ကျောင်း၏ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် လက်ထောက် ဆရာတော်တို့မှာ အင်္ဂလိပ်စကားကို အ တော်အသင့်ပြော နိုင်ကြရကား ယင်းဆရာဝန် အတွက်လွန်စွာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့လှပေသည် ဧည့်ခံလိုက်သ ည်မှာလည်း အားနာစရာ ပင် ကေါင်းပေတော့သည်
၂ ရက်မျှ တည်းခိုအပြီး ဆ ရာဝန်မှ မိမိတွေ့ခဲ့သည့်ထူးခြားမှုကို ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကြီးအား မေးမြန်း လျှောက်ထားလိုက်သည်
” အရှင် ဘုရား..တပည့်တော် သိလိုသမျှ လေး မေးခွင့်ပြုပါဘုရား”
” မေးပါ ဒကာ..မေးပါ..အားနာစရာမလိုပါ”
ထိုအခါ ဆရာဝန်မှ…” အရှင် ဘုရားတို့ကျောင်းမှာ ရဟန်းတော်များ အားလုံး အသက်လွန်စွာ ရှည်နေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်ဘုရား…ဟိုမှထင်းခွဲနေသည့် ကိုယ်တော် အသက်၈၅ နှစ် ရေခပ် ရေထမ်းနေ သည့်ကိုယ်တော်က၉၁နှစ် ထင်းစည်းအကြီးကြီးကိုထမ်းပိုးနေတဲ့ကိုယ်တော်က..၈၇နှစ် ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်များ ဤမျှ အသက် ရှည် ရသည်ကို တပည့်တော်အား မိန့်စေလိုပါသည်ဘုရား”
” အိမ်း မိန့်ရတာပေါ့ဒကာ..အခု ကျုပ်အသက်ဆို၁၂၁ နှစ် ဘေးက လက်ထောက် ဘုန်းဘုန်းဆို…၁၁၅ နှစ်.. ဒီအသက်အရွယ်ထိ ဆေးရုံ ဆေးခန်းဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ..
အဲသည်ဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့.မောင် ရင် တို့အသားဟင်းချက် ရင် ထု ထောင်းပြီးထည့်တဲ့ ဂျင်းကိုသိလား.အဲသဟာကို က လေးဘဝထဲက နေ့စဉ်စားသုံးခြင်းကြောင့်ဘဲ ဒကာ.
မောင် ရင် တို့ဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်စား နေတဲ့ ဂျင်စင်းမြစ် ထက် အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ လူတွေမသိကြတာပါ ဂျင်းလက်တစ်ဆစ်ကို ဘုန်း၂ တို့က တော့ အာရုံဆွမ်းစားပြီးတာနဲ့တန်းစားလိုက်တာဘဲ..မောင် ရင် လည်း ဒီအကြောင်း ကိုယ့်နိုင် ငံ ရောက် ရင် များ၂ဖြန့်ဝေပါ”
ကဲ..မိမိတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့်ရောဂါများ လျာ့ပါးသက်သာ စေရန်လည်းကောင်း..မိမိ၏ ရောက် နေသည့် အသက်မှ နောက်ထပ် နှစ်၂၀ ခန့်ဆွဲဆန့်နိုင် ရန်လည်းကောင်း ဂျင်းလက်တစ်ဆစ် နေ့စဉ် ဝါးစားပါ
သင် နောက်မကျ သေးပါ..
Next အဖိုး နည်းပေမယ့် အကျိုး များ တဲ့ ဆီးဖြူ
Previous သံဃာတော်တွေ မြင်တာနဲ့ မြေပေါ်မှာ ထိုင် လို့ ဦးချကန်တော့ကြ မြို့လေး
ပုရိသတွေ ကြွေသွားစေမယ့် အရမ်းကို မိမိုက်လွန်းတဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
အမျှ အတမ်း ပေးဝေခြင်း အကျိုး
ရေကူးကန်လေးထဲမှာ ခပ်မိုက်မိုက် ပုံစံလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးအနားယူအပန်းဖြေနေတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
ဘာဘီရုပ်လေးလို ချစ်စရာမျက်နှာလေးနဲ့ချစ်အားပိုစေတဲ့ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတဲ့နေခြည်ဦး
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ကြောင့် အမျိုးသားများဖြစ်တက်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ
အဖိုး နည်းပေမယ့် အကျိုး များ တဲ့ ဆီးဖြူ
သံဃာတော်တွေ မြင်တာနဲ့ မြေပေါ်မှာ ထိုင် လို့ ဦးချကန်တော့ကြ မြို့လေး
နှင်းဆီ ဆယ် ခက် စီးပွား တက်a
MalMaDi © 2020. All Rights Reserved.